၅၀၅ (က) ဖမ်းဝရမ်းထုတ်ခံရပေမယ့်လည်း အမှန်တရားအတွက် ဘယ်တော့မှနောင်တမရဘူးဆိုတဲ့ ဖွေးဖွေး…. – Cele Oscar
၅၀၅ (က) ဖမ်းဝရမ်းထုတ်ခံရပေမယ့်လည်း အမှန်တရားအတွက် ဘယ်တော့မှနောင်တမရဘူးဆိုတဲ့ ဖွေးဖွေး….
April 12, 2021 By L YC News
“ပြည်သူ တစ်ယောက် အနေနဲ့ လုပ်သင့် လုပ်ထိုက်တာ ပြောသင့် ပြောထိုက် တာတွေ ပြောခဲ့ ရ လို့ ဘယ်တော့မှ နောင်တ မရပါဘူး။ကိုယ့်ခံယူချက် ပြည်သူ့ အမှန်တရား ကို တသား ထဲ အမြဲ သစ္စာ ရှိ သွားပါဦးမယ် နေ့တိုင်း ဆုတောင်း ပေးပါ့မယ်။
အားလုံး ဂရုစိုက်ကြ ပါရှင် ဘာလိုလို နဲ့ ပိတောက်ပန်းတွေ တောင် ပွင့်တော့မယ်… နွေဦးလေးတို့ ရယ်” ထပ်ဆင့် အကယ်ဒမီ ဖွေးဖွေး။“ပြည်သူတစ်ယောက်အနေနဲ့ လုပ်သင့် လုပ်ထိုက်တာ ပြောသင့် ပြောထိုက် တာတွေ ပြောခဲ့ရလို့ ဘယ်တော့မှ နောင်တ မရပါဘူး။
ကိုယ့်ခံ ယူချက် ပြည်သူ့ အမှန်တရားကို တသား ထဲ အမြဲ သစ္စာ ရှိသွားပါဦးမယ် နေ့တိုင်း ဆုတောင်းပေးပါ့မယ်။အားလုံး ဂရုစိုက်ကြပါရှင် ဘာလိုလို နဲ့ ပိတောက်ပန်းတွေ တောင်ပွင့်တော့မယ်… နွေဦးလေးတို့ရယ်” ထပ်ဆင့် အကယ်ဒမီ ဖွေးဖွေး။
“ပွညျသူ တဈယောကျ အနနေဲ့ လုပျသငျ့ လုပျထိုကျတာ ပွောသငျ့ ပွောထိုကျ တာတှေ ပွောခဲ့ ရ လို့ ဘယျတော့မှ နောငျတ မရပါဘူး။ကိုယျ့ခံယူခကျြ ပွညျသူ့ အမှနျတရား ကို တသား ထဲ အမွဲ သစ်စာ ရှိ သှားပါဦးမယျ နတေို့ငျး ဆုတောငျး ပေးပါ့မယျ။
အားလုံး ဂရုစိုကျကွ ပါရှငျ ဘာလိုလို နဲ့ ပိတောကျပနျးတှေ တောငျ ပှငျ့တော့မယျ… နှဦေးလေးတို့ ရယျ” ထပျဆငျ့ အကယျဒမီ ဖှေးဖှေး။“ပွညျသူတဈယောကျအနနေဲ့ လုပျသငျ့ လုပျထိုကျတာ ပွောသငျ့ ပွောထိုကျ တာတှေ ပွောခဲ့ရလို့ ဘယျတော့မှ နောငျတ မရပါဘူး။
ကိုယျ့ခံ ယူခကျြ ပွညျသူ့ အမှနျတရားကို တသား ထဲ အမွဲ သစ်စာ ရှိသှားပါဦးမယျ နတေို့ငျး ဆုတောငျးပေးပါ့မယျ။အားလုံး ဂရုစိုကျကွပါရှငျ ဘာလိုလို နဲ့ ပိတောကျပနျးတှေ တောငျပှငျ့တော့မယျ… နှဦေးလေးတို့ရယျ” ထပျဆငျ့ အကယျဒမီ ဖှေးဖှေး။